မဲဆောက်မြို့ - ဝီကီပီးဒီးယား
မဲဆောက်မြို့ သည် ထိုင်းနိုင်ငံ အနောက်ပိုင်းတွင် တည်ရှိသော မြို့တော်တစ်ခု ဖြစ်ပြီး အနောက်ဘက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် နယ်နိမိတ်ချင်း ထိစပ်လျှက် ရှိသည်။ ကုန်သွယ်ရေး ဗဟိုဌာနတစ်ခု အဖြစ် ရှိသည့်အပြင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်လာသူ များနှင့် ဒုက္ခသည်များ ရှိသောကြောင့် လူသိများသည်။ တာ့ခ်ခရိုင်၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုဖြစ်ပြီး တာ့ခ်မြို့ မှ ၈၇ ကီလိုမီတာကွာဝေးကာ ဘန်ကောက်မြို့မှ ၄၉၂ ကီလိုမီတာ ကွာဝေးသည်။ မဲဆောက်ဒိစတြိတ် ၏ ဒိစတြိတ်ရုံးချုပ် တည်ရှိရာမြို့ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံကြား ဆက်သွယ်သည့် တံခါးပေါက် တစ်ခု အဖြစ် တည်ရှိသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် ကျောက်သံပတ္တမြား နှင့် ကျွန်းသစ်တို့ ကုန်သွယ်ရာ နေရာအဖြစ်လည်းကောင်း၊ လူကုန်ကူးခြင်း နှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးမှောင်ခိုမှု တို့ အတွက်လည်းကောင်း နာမည်ဆိုးဖြင့် ကျော်ကြားသည်။
ထိုင်းမြန်မာ ချစ်ကြည်ရေးတံတား ၏ မြင်ကွင်းပုံ
၅ နာမည်ကျော် နေရာများ
၁၉၃၇ ခုနှစ်တွင် မဲဆောက်သည် သူကြီးအုပ်ချုပ်သော နယ်တစ်ခု သာဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်က လူဦးရေမှာ ၁၂,၀၀၀ ခန့်သာ ရှိခဲ့သည်။ ၁၉၃၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်တွင် မဲဆောက်အား စည်ပင်သာယာ နယ်နိမိတ် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ကျေးရွာ ၂၇ ရွာကို အုပ်ချုပ်ရာ အဖြစ်ရှိခဲ့သည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် မြို့အဖြစ် အဆင့်မြှင့် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
အနီးအနားရှိ ဒိစတြိတ်များမှာ မြောက်ဘက်တွင် မဲပ ဒိစတြိတ်ခွဲ ၊ တောင်ဘက်တွင် မဲတောင် ဒိစတြိတ်၊ အရှေ့ဘက်တွင် မဲပ နှင့် ဖရားသတ် ဖာဒန် ဒိစတြိတ်ခွဲ နှင့် အနောက်ဘက်တွင် သာဆိုင်လတ် ဒိစတြိတ်ခွဲ တို့ ဖြစ်ကြသည်။ မဲဆောက်မြို့ အနီးတွင်း သောင်းရင်းမြစ် ဖြတ်သန်းစီးဆင်းလျှက် ရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံနှင့် နယ်နိမိတ် အဖြစ် တည်ရှိကာ သောင်းရင်းမြစ်၏ တစ်ဖက်ကမ်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကရင်ပြည်နယ် အတွင်း ပါဝင်သော မြဝတီမြို့ ရှိသည်။
မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ကုန်သွယ်ခြင်းသည် မဲဆောက်မြို့ စီးပွားရေး၏ အကြီးမားဆုံး အပိုင်းဖြစ်သည်။ မဲဆောက်တွင် ကျောက်မျက်ရတနာနှင့် ကျွန်းသစ်တို့ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာ ဈေးရှိသည်။ မြို့အတွင်းရှိ ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများက လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိကြပြီး မြန်မာတို့သည် ဒေသအတွင်းရှိ ကာယသုံး အလုပ်များနှင့် စက်ရုံများတွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်လျှက် ရှိကြသည်။ မဲဆောက်မြို့သည် တရားမဝင် မှောင်ခိုရောင်းဝယ်ခြင်း၊ လူကုန်ကူးခြင်းနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ်ခြင်း တို့၏ ဒဏ်ကို ခံရသည်။ ထိုင်း-မြန်မာချစ်ကြည်ရေးတံတားသည် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ကုန်သွယ်ရာတွင် တံခါးပေါက်အဖြစ်တည်ရှိသည်။ ရင်းမြွေဈေး အပါအဝင် မဲဆောက်မြို့လယ်မှ ကီလိုမီတာ အနည်းငယ်ဝေးသော နယ်စပ်ဒေသတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ တင်သွင်းသာသော ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် သစ်သားဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများကို ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားလျှက် ရှိကြသည်။
စစ်အစိုးရခေါင်းဆောင်နှင့် ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သော ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ပရာရွတ် ချန်အိုချာ သည် ၂၀၁၅ ခုနှစ် မေလတွင် သူ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို အသုံးပြု၍ ပုဒ်မ ၄၄ အရ ယာယီကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး မဲဆောက်၏ ဒိစတြိတ်ခွဲဖြစ်သော သာဆိုင်လတ် ဒိစတြိတ်ခွဲရှိ ဝမ်တာ့ခ်ဟန် ဒေသကို အထူးစီးပွားရေးဇုန် အဖြစ် သတ်မှတ်ကြေငြာခဲ့သည်။ လက်ရှိ အစီအစဉ်အရ သာဆိုင်လတ် ရှိ ၂,၂၀၀ ရိုင် (၈၈၀ ဧကခန့်) မျှ ရှိသော မြေများကို အထူးစီးပွားရေးဇုန် အဖြစ် ပြောင်းလဲရန် ဖြစ်သည်။ အစိုးရမှ စီမံကိန်းကြောင့် ရွှေ့ပြောင်းရသော ရွာသားများအား ၎င်းတို့ ပိုင်ဆိုင်သော မြေ ၁ ရိုင်လျှင် ၇,၀၀၀ မှ ၁၂,၀၀၀ ဘတ်အထိ လျော်ကြေးပေးခဲ့ပြီး အခြား ဒိစတြိတ်တစ်ခု ဖြစ်သော တာ့ခ်တွင် ပြန်လည် နေရာ ချပေးခဲ့သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ပေါက်ဈေးအရ မဲဆောက်တွင် မြေ ၁ ရိုင်လျှင် ဘတ် ၁ သန်း ခန့်မျှ ပေါက်ဈေးရှိသဖြင့် ရွာသားများက လျော်ကြေးပေးရန် ကမ်းလှမ်းမှုကို ငြင်းဆိုကြသည်။ 
မဲဆောက်တွင် ကော့ပန် ရာသီဥတု အမျိုးအစားအရ အပူပိုင်း ဆဗားနား ရာသီဥတု ရှိသည်။ ဆောင်းရာသီသည် ခြောက်သွေ့ပြီး အလွန်ပူသည်။ အပူချိန်သည် ဧပြီလ အထိ တိုးလေ့ ရှိပြီး ဧပြီလတွင် ပျမ်းမျှ နေ့စဉ် အပူးဆုံး အချိန်မှဦ ၃၆.၈° ဆဲလ်စီးယပ် (၉၈.၂° ဖာရင်ဟိုက်) ရှိသည်။ မုတ်သုံ ရာသီဥတုသည် မေလ မှ အောက်တိုဘာလ အထိ ရှိတတ်ပြီး နေ့ဘက်တွင် မိုးအလွန်များ၍ အနည်းငယ်မျှ အေးမြသော အပူချိန် ရှိတတ်ကာ ညဘက်တွင်မူ ပူပြင်းလျှက်ပင် ရှိသည်။
မဲဆောက်မြို့တွင် ဒေါက်တာ စင်သီယာမောင်၏ မယ်တော်ဆေးခန်းကို ဖွင့်လှစ် ထားသည်။
↑ Yudthaphon Vichianin (Aug 5, 2003)။ Village Chief Lee (interactive)။ Thai Language Program။ University of Hawaii at Manoa။ March 20, 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ March 20, 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลแม่สอด จังหวัดตาก พุทธศักราช ๒๔๘๒" (in Thai) (1939-09-30). Royal Gazette 56 (0 ก): 959–962.
↑ "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลเมืองแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นเทศบาลนครแม่สอด" (in Thai) (2010-04-21). Royal Gazette 127 (พิเศษ 50 ง): 7.
↑ "Local farmers suffer as Thai junta pleases big companies"၊ Prachatai English၊ 2016-07-11။ 12 July 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မဲဆောက်မြို့&oldid=449835" မှ ရယူရန်
၁၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၉၊ ၁၀:၀၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၉၊ ၁၀:၀၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။